Hadal-Jeedintii Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Kulankii Sabtida – Kalfadhi
Kulankii Sabtada la soo dhaafay ayaa Xildhibaanada Golaha Shacabku waxay isku weydaarsadeen hadalado kul-kulul, heer ay qaarkood si cad isugu weeraraan hadalada. Xildhibaanada, oo ay ku jireen Wasiiro, ayaa waxaa hor yaalay oo ay ka doodayeen War-bixinta Miisaaniyadda 2018 ee uu Golaha u soo gudbiyey Guddiga Maaliyadda. Sidii ay ahayd hadal-jeedintoodii Golaha hoos ka aqriso:-
Xildhibaan Maxamed (Soomaali): 10 Xildhibaan oo ka mid ah 18-ka Xubnood ee Guddiga Maaliyadda ayaa saxiixeen warqadda tabashada ah ee lagu muujinayo inuusan Guddiga Maaliyaddu u marin Hab-raaca Xeer Hoosaadka Golaha Shacabka War-bixinta Miisaaniyadda 2018-ka ee Golaha hor taal.
Koley, aniga ma joojin goobta war-bixintaas lagu ansixinaayey, xildhibaanada qaarkoodna majoogin, wax sawir ah oo lahaayana majiraan, waxaana loo baahnaa in la keeno Miisaaniyad 3 Biloodle ah, laakiin lama gaarin Miisaaniyad Sanadeedka waqtigeeda.
Xildhibaan Cali Xoosh: War-bixintaan waa mid laga soo hormariyay waqtigeeda, waxaana la doonayaa in lagu carqaladeeyo shaqada quruxda badan ee Maaliyadda, waxayna dhabar jab ku tahay hankii laga lahaa cafinta daymaha Soomaaliya. Waxaan codsanaynaa in raali-galin laga bixiyo, cid saxiixdayna majirtoo waa been-abuur.
Xildhibaan Cali Cabdi, oo ah Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda: Waxaan haynaa saxiixyada iyo sawiradii laga qaaday xildhibaanada, waana qalad in xildhibaanada qaarkood ay difaacaan Wasaaradda Maaliyadda. Inagu, Xildhibaanada ayaan usoo gudbinaa qaladaadka jira.
Xildhibaan Cabdullaahi Macalin Nuur, ah Guddoomiyaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka: Waxaa ceeb ah in xildhibaanada war-bixinta wax ka qoray ay yiraahdaan ma joogin, waana in ay ilaaliyaan xildhibaanada sharaafkooda. Xildhibaanada Baarlamanka qaar hadii ay la xumaatay inta ha ka sheegaan, oo ha dhahaan waan ka noqonay. Xildhibaan Maxamed Soomaali, oo ahaa dadkii Guddoominayay cabashada, maahan in uu yiraahdo ma joogin, waxaana ognahay ololaha balaaran oo ay Xulumaddu ugu jirto in ay arrintaan hor istaagto.
Xildhibaan Cabdixakiin Macalin, oo ka tirsan Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka: Waxaan ku faraxsanahay in xildhibaanada halkaan ka hadlay aysan dhihin war-bixintu waa qaldan tahay, laakiin ay leeyihiin sida loo maraa qaldan, waxaana u baahanay in uu halkaan yimaado xildhibaanka qaba in ay qalad tahay. Aniga waxaan saarnaa diyaarad marka sharciga la qaybinayay, waana isoo gaaray. Waxaan qiraa in dadka meeshaan fadhiya qaarkood ay joogeen marka sharcigaan uu Guddiga baarayey, kana shaqaynayay.
Xildhibaan Sahra Cabdulqaadir, oo ka tirsan Guddiiga Maaliyadda: Anigu waxaan hubaa in war-bixibta uu Guddigu u soo gudbiyey Guddoonka aanan ogeen, waana diidanahay, waliba waa la soo hordhacay, waana nalaga qariyey xogaheeda. Guddigu ha keeno meesha uu noogu sheegay war-bixinta.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, oo ah Wasiirka Maaliyadda: Waxaan ka jawaabayaa eedeymaha faraha badan ee la ii soojeediyay. Dadka qaar ayaa qaba in 2 lagu daray 2 ay tahay 3, waana qalad. Waxaa la soo gudbiyay warqad dhaleeceyn ah, oo dhabarka ka jabinaysa dadka Soomaaliyeed. Waxaa dadaal weyn loo soo galay in aan bixino mushaarka ciidanka, waxaana dadaal weyn loo galay in aan ka gudubno lacagaha faraha badan ee ah deymaha na dhabar jabiyay. Waxaan ku shaqaynaa nidaam caalami ah, waxaana nagula xiray 14 qodob oo habeen waliba nagula yiraahdo. Guddigu waxay ahayd in ay anaga nala tashadaan intii ay warqad u qori lahaayeen war-baahinta, anagaa ku jirna ceelka guntiise e. Arintaan waxa ay nagu noqotay dhabar jab iyo in dib noola celiyo.
Su’aasha koobaad haddaan ka jawaabo, lacagtii shaqaalaha ayaa hoos u dhacday. Shaqaalaha waxaa ka yimid 37 kun, Imaaraadkana lacag kama imaan. Sacuudiga waxaa ka yimid 50 milyan, kuma soo dhicin Bankiga Soomaaliya; waxay ku dhacday akoon ku yaala Turkiga, halkaas ayaana laga maamulaa. Aniga, waxaa laygu haystaa mashruuc ii fuli.
Marka laga hadlayo dhaqaalaha lacagta dalka, waxa la soo hadal qaaday Gobalka Banaadir, waxaana dhaqaalaha oo dhanba ka soo saarnaa Gobalka Banaadir. Waxaad garab igu siisaan in aan mideyno Canshuurta Guud ee Dalka. Hadalkayga waxaan ku soo gaba-gabaynayaa in arrinkan uu yahay mala-awaal iyo kutiri-kuteen la soo dhoodhoobay, markastana waa in la ogaadaa qoraalada Saamaynta iyo dib u dhaca uu ku yeelanayo dalka.
Xildhibaan Maxamuud Xayir, oo ah Wasiiru Dowlaha Maaliyadda: Koox yar oo ka mid ah Guddiga Maaliyadda ayaa sameeyeen been-abuur, iyagoo dano gaar ah leh ayey doonayaan in ay Wasaaradda ka been-abuurtaan. Waxaan ku shaqaynaa hishiis caalami ah, oo ah Soomaaliyeey gacmahiina nadiifiya, haddii aad rabtaan in la idin aamino, oo lacagaha la idinka cafiyo. Waxaan haynaa war-bixinadii nalugu amaanay ee Hay’addaha Caalamiga ah, laakiin waxaa muuqata in dadka qaar aysan u muuqan. Waxaa layaab leh laba iyo sadax ruux oo katirsan guddi muhiim ah, oo dana gaar ah leh in ay naga been-abuurtaan. Waxaan ognahay in ay guddiga ku jiraan dad laga qaaday qandaraasyo gaar ah, oo waayay dana gaar ah.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo ah Xoghayaha Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka: Baarlamaanka maanta waxa uu noqday shineemo oo kale, waliba iyadoo ay meesha fadhiyaan oo ay sacbinayaan dadkii lunsaday hantida dadka.
Uma jawaabayo Wasiirada caytamay, waxaanna layaabay lacagta aan weynay ee la sheegay in ay dalka dibadiisa taalo, waana qalad in ay lacag ka maqnaato Bangiga Fhexe 24 saac kabadan.
Wasiir ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda waxa uu sheegay in qof ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda uu si qaldan lacagtaas ugu shubay bangi Turkiga ku yaala, waxaana haynaa cadeyn ah in amarkaas uu bixiyay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda.
Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad, oo ah Gudoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka: Goluhu wuxuu la xisaabtamaa hay’adaha dowladda, waana in uu isla xisaabtamaa dhexdiisa. Waxaan raali-galin ka bixinaynaa in Golaha la keeno xeer ama hawl aan lala wadaagin Guddiga Joogtada ah iyo Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana raali-galin ka bixinaynaa hadii qalad naga dhacay. Guddiga Maaliyadda, oo ah guddi aad u shaqa badan, waxaa ka yimid duleel, waxayna guddigu sheegeen in ay ku wada hadleen whatsapp-ka.
Baarlamaanku masheegin in la lunsaday $40 milyan. Waxaan ka siinaynaa raali-galin shacabka iyo Wasaaradda Maaliyada, war-bixintaanna hab-raac sax ah lama soo marsiin. Xeerkaan halkaas ayaa looga gudbayaa, dib dambana looma keeni karo Golaha, kulankuna waa uu noo xiran yahay.